Muungaab oo ka digay in laalush lagu bixiyo warqadaha aqoonsiga (Aqri) - Caasimada Online
Home Warar Muungaab oo ka digay in laalush lagu bixiyo warqadaha aqoonsiga (Aqri)
Muungaab oo ka digay in laalush lagu bixiyo warqadaha aqoonsiga (Aqri)
Muqdisho (Caasimada Online) Guddoomiyaha gobalka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Sareeyo guud, Xasan Maxamed Xuseen Muun-gaab ayaa sheegay in loo fududeeyo dadka qaadanaya warqadda aqoonsiga muwaadinimada.
Muun-gaab oo in dhihiisa ku soo arkay dhibaatada ka jirta xarunta laga qaato warqaddaha, ayaa sheegay in aan loo dul qaadan doonin in dadka lagu dhibo warqadda ama laga qaato lacago laaluush sidda uu yiri.
Wuxuu tilmaamay ciddii lagu qabto iyagoo shacabka laaluush ka qaadaysa in tallaabo sharciga waa faqsan laga qaadi doono.
Hadalka Muun-gaab ayaa imaanaya iyadoo dhibaatooyin waaweyn ay ku qabaan muwaadiniinta Soomaaliyeed helitaanka warqadda aqoonsiga.
Wariye ka tirsan caasimada Online, oo tagay xarunta laga qaato warqadda muwaadinnimada ayaa soo arkay in dadka ay dhib ku qabaan heli taaganka warqaddahaas, waxaana uu sheegay in marka qaar qofka ay ku qaado bil ama wax ka abdan in uu helo warqaddaas.
Si kastaba, Guddoomiye Muun-gaab ayaa looga fadhiyaa in uu wax ka badalo dhaliilaha loo jeedinaayo dowladda Hoose.